Intlanganiso Eyabukelwa Nge-Intanethi Ehlabathini Lonke
NgoMgqibelo, ngo-Oktobha 5, 2013 kwakukho abantu abayi-257 294 ababephulaphule, abanye abasuka kumazwe ayi-21 babephulaphule ngeIntanethi intlanganiso yonyaka ye-129 yeWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Amanye amaNgqina ongezelelekileyo aphinda adlalelwa olo cwangciso ngasekupheleni kwaloo mpelaveki. Bebonke abayibukelayo bayi-1 413 676 kumazwe ayi-31. Le ntlanganiso yamaNgqina kaYehova yalo nyaka yeyona ibinkulu xa ithelekiswa nocwangciso olukhethekileyo obeluseMexico nakuMbindi Merika ngoAprili 28, 2013 obelunabantu abayi-1 327 704.
Ukususela ngeminyaka yee-1920, amaNgqina kaYehova ebesasaza iindibano zawo ngeefowuni nangoonomathotholo ehlabathini lonke. Ngoku i-Intanethi ibangela ukuba nabantu abakwiindawo ezisemagqagaleni babone okanye beve ucwangciso ngoko nangoko okanye kamsinya nje emva kokuba luphelile. Ngo-1942, uWilliam, oliNgqina likaYehova eUnited States, waluphulaphula efowunini ucwangciso eRichmond, eVirginia. Ethelekisa oko nentlanganiso yalo nyaka, uthi: “Kuninzi okufumanayo kucwangciso xa umbona umntu othethayo. Alunakuthelekiswa nanto.”
Amalungu eeofisi zamasebe ezahlukahlukeneyo zamaNgqina kaYehova asebenze ngaphezu konyaka elungiselela ukusasazwa kwale ntlanganiso ngeIntanethi, ngaloo ndlela enikela ngexesha lawo elininzi. Ngempelaveki yokusasazwa kwale ntlanganiso, iingcali zazilungiselela ucwangciso eBrooklyn, eNew York ibe zasebenza imini nobusuku bayo kuba olu cwangciso lwaluboniswa kwiindawo eziyi-15 ezinamaxesha ahlukahlukeneyo. URyan, owayesemaqhosheni wathi: “Zange sibuthi cwe ubuthongo, kodwa xa sicinga ngabantu abaninzi ababeza kungenelwa kolu cwangciso sasisithi sifanele ukungalali.”
Iikhamera zifota olu cwangciso zize ziluthumele komnye umatshini onceda ekukhetheni owona mfanekiso usemgangathweni. Xa ziphuma kulo matshini ziye zifumaneke kuwonke-wonke.
Emva koko le vidiyo ithunyelwa kwikhompyutha. Kuze kusetyenziswe loo khompyutha ekuyithumeleni kwiindawo ezahlukahlukeneyo, le nto yenza imifanekiso namazwi athathe ixesha xa ethunyelwa ngolu hlobo. Ngenxa yoko, abaphulaphuli bayakwazi ukubona baze beve ucwangciso emva kwemizwana eyi-30 ukuya kutsho kweyi-60.
Kuthekani ukuba i-Intanethi iyacotha? Umgangatho womfanekiso nowesandi uyathotywa ngoko nangoko ukuze ividiyo iqhubeke idlala, kuza kwala yakubuya i-Intanethi umgangatho womfanekiso nowesandi uphinde unyuke. Enoba i-Intanethi iyaphela, ividiyo iza kuqhubeka idlala. Ukuba iphinde yabuya ingalindelekanga, abaphulaphuli abasoze babone nokuba kukhe kwakho ingxaki. Ekubeni le ndlela intsha yokwenza izinto isenokuba neengxaki, kukho nezinye iindlela ezisetyenziswayo ngamaxesha eengxaki.
Izinto Ezibangel’ Umdla—Iindawo Ekusasazwa Kuzo
Indawo eyayikuyo: KwiHolo yeNdibano yamaNgqina kaYehova eJersey City, eNew Jersey, eUnited States. Ababekho: 4 732.
Abona bebebaninzi: EPerth, eOstreliya. Ababekho: 7 186.
Eyona ndawo ikude ngakumntla: EFairbanks, eAlaska, eUnited States. Ababekho: 255.
Eyona ndawo ikude ngakumzantsi: EInvercargill, eNew Zealand. Ababekho: 190.
Eyona ndawo ikude: EPerth, eOstreliya, emalunga neekhilomitha eziyi-18 700 ukusuka eJersey City.
Kubukelwe ucwangciso eKatherine, eNorthern Territory, eOstreliya